Olee otu ndị na-ere ọkụ na-arụ ọrụ si arụ ọrụ na ihe kpatara azụmaahịa ọ bụla ji chọọ otu
Ndị na-ewepụta ihe na-ewepụta ndụ bụ ihe na-azọpụta ndụ n'oge ikike ọpụpụ na-ebute site na ndakpọ, oké ifufe, na ihe ndị ọzọ. Imirikiti nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọgwụ, ụlọ akụ na azụmaahịa chọrọ ike na-enweghị ike ịkwụsị elekere. Ihe di iche n'etiti ihe jenerato na ihe bu generator bu na njikere ...
Gịnị bụ mmetụta nke mmanụ dizel na-enweghị ndozi na igwe ..
Achọrọ ka onye na-ewe mmanụ diesel dị jụụ rụọ ọrụ na mmezi, onye na-arụ ọrụ diesel nkịtị na-arụ ọrụ ọfụma, ịgbanye mmanụ diesel na-adịghị arụ ọrụ, ndụ ogologo ndụ, nke bụ na onye na-adị jụụ diesel na-emezi mmezi na mmezi nwere nnukwu mmekọrịta a. 1. Na-ajụ syste ...
5 Mere na I Kwesịrị itinye ego na a dizel Generator
Kemgbe ọtụtụ afọ, ndị na-eji mmanụ dizel ejirila maka mkpa azụmahịa na nke obibi. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka naanị ụlọ ọrụ azụmaahịa, ha na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ọtụtụ ebe. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụike, ụlọ ọrụ nri, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ejiji, ojiji ha niile maara nke ọma ...
Kedu ụzọ iji hichaa akụkụ nke generator?
1. Nhicha mmanu Mmanụ Mgbe ntụpọ mmanụ dị n'akụkụ akụkụ ahụ dị oke, ọ ga-ebu ụzọ kpochapụ ya. Onye na-ere ihe mgbazinye mgbazinye nke abụọ, na-ehicha elu nke akụkụ mmanụ, ihe eji eme ihe na-ehicha mmiri gụnyere alkaline nhicha mmiri na ihe nchọpụta sịntetik ...
Nchịkọta nchekwa nchekwa jenerato: Mkpachapụ anya ndị ọrụ genset kwesịrị ịma
Igwe na-enye ọkụ bụ ihe eji arụ ọrụ iji nwee n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Igwe ọkụ genset bụ ezigbo enyi gị n'oge mgbapụ ike, ebe ị na-adabere na ngwa a iji mee ka igwe gị rụọ ọrụ. N'otu oge ahụ, ị ​​ga-akpachara anya mgbe ị na-ejikwa genset gị maka ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enweghị ike ime nke a ...
Na usoro nke iji ndị na-emepụta diesel, ndị ahịa kwesịrị ị paya ntị na ọnọdụ okpomọkụ nke coolant na mmanụ ọkụ, ọtụtụ ndị ahịa nwere ajụjụ a, otu esi enyocha ọnọdụ okpomọkụ ahụ? You kwesịrị iburu temometa gị na ya? Azịza ya dị nnọọ mfe, iji wụnye ihe mmetụta okpomọkụ maka ...
Gịnị bụ Dizel Generator? A na-eji ihe na-emepụta mmanụ diesel iji nweta ike eletrik site na iji injin diesel yana igwe eletrik. Enwere ike iji generator gas dị ka ọkụ ọkụ na-eweta ihe mberede ma ọ bụrụ na ọ ga - ebe ike ma ọ bụ ebe enweghị njikọ na ntanetị ike. Ofdị ...
Kedu ka thermostat si arụ ọrụ Ugbu a, injin diesel na-ejikarị thermostat wax na arụ ọrụ arụmọrụ. Mgbe mmiri jụrụ mmiri dị ala karịa ogo a tụrụ atụ, a na-emechi valvụ thermostat na mmiri jụrụ ahụ ga-ekesa naanị na mmanụ dizel na obere wa ...
Obi ụtọ ụbọchị ụmụ nwanyị mba ụwa! Ekele dịrị ndị ọrụ nwanyị anyị niile. Ike Hongfu chọrọ ka unu niile bụrụ ụmụ nwanyị bara ọgaranya, nwee mmụọ bara ụba: enweghị echiche, nchekwube, ihu ọchị, ịhụnanya ka baa ọgaranya: na-enwekarị obi ụtọ, nwee obi ike; ọgaranya: na nrọ ndụ, na-ewe naanị ụgwọ nke. Nwee ụbọchi ụmụ nwanyị nwee ọ !ụ!
Stationslọ ọrụ na-enye ike nke Hongfu Power rụpụtara achọpụtala ngwa ha taa, ma na ndụ kwa ụbọchị na mmepụta ụlọ ọrụ. Na ịzụta mmanụ dizel AJ usoro ihe eji emepụta ihe na-atụ aro ka ọ bụrụ isi iyi yana ndabere. A na-eji ngwa dị otú ahụ nye voltage ma ọ bụ mmadụ ...
240kw Generator, Igwe Ọdụdọ ndọta, Generator Maka ire ere, Generator 125kva, Ahịa Generator, Obere Generator 6kw,